राजनितिमा सबै मान्छे खराव हुँदैनन् भनेर प्रमाणित गर्न चाँहन्छु : साधुराम खड्का — Motivate News
Posted on November 30, 2017 by motivate news
काठमाडौ – नेपाली काँगे्रसको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ को प्रदेश सभा ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि उमेद्वार रहेका छन् साधुरमा खड्का । आफूलाई भष्ट्राचार विरोधी र विकास प्रेमी नेताका रुपमा चिनाउन चाँहने खड्काको प्रतिशपर्धा यसपटक एमालेका उमेद्वार कुसुम कार्कीसंग हुँदैछ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका ८ वटा वडा समेटिएको काठमाडौँ ४ को प्रदेश सभा (ख) मा खड्का र कार्कीको प्रतिशपर्धालाई रोचक रुपमा हेरिएको छ । उनै उमेद्धार साधुराम खड्कासंग उनका चुनावि एजेण्डाका बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानिको संपादित अँश ।
काठमाडौँ ४ को प्रदेश सभा ‘ख’ का लागि उमेद्वार बन्नुभएको छ, कस्तो महशुस हुँदैछ ?
नेपालको इतिहाँसमा हामीले पहिलो पटक प्रदेश सभा निर्वाचनको अभ्यास गर्दै छौँ । यो एक ऐतिहाँसिक अवसर हो । स्वाभाविक रुपमा पहिलो पटक हुँदै गरेको निर्वाचन भएकाले जनतामा केहि अन्यौलता र कौतुहलता पक्कै छ । तर समय संगै मतदाताहरुले पनि यसको बारेमा प्रयाप्त जानकारी लिन थालिसक्नुभएको छ । हामीले घरदैलो र नियमित मतदाता भेटघाट मार्फत यसमा रहेका अन्यौलताहरुलाई धेरै हदसम्म चिर्न सफल भएको छौँ ।
तपाईको क्षेत्रको प्रतिनिधी सभामा यसपटक काँग्रेसका यूवा नेता गगन थापा र एमालेका यूवा नेता राजन भट्टराई विचको रोचक प्रतिशपर्धा देखिन्छ, जुन राष्ट्रिय चासोको विषय बनिरहेको छ । जसले गर्दा तपाईहरुको विषय अलि ओझेल पो परेको हो की ?
प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै दिन हुनाले प्रतिनिधी सभाको चर्चा अलि बढि भएको र मिडियाले पनि त्यसैलाई बढि स्पेस दिएको पक्का हो । हाम्रो क्षेत्रमा २ जना यूवा नेताको प्रतिशपर्धाले रोचक परिस्थिति बनेको पनि साँचो हो तर प्रदेशको निर्वाचन पनि एक ऐतिहाँसिक अवसर हो । यसको छुट्टै महत्व छ । हामी आफ्ना विचारहरु लिएर जनताको माझमा गइरहेका छौँ । उनीहरुलाई आफ्ना एजेण्डाहरु स्पष्ट पारिरहेका छौँ । वाहिरबाट हेर्दा हाम्रो विषय ओझेल परेको होकि जस्तो लाग्ला तर हामी रात दिन यहि क्षेत्रका जनतासंग उठवस गरेको, उनिहरुको हरेक दुख सुखसंग नजिक रहेर काम गरेका कारण जनतामा जान सजिलो छ । र उनिहरुले पनि राम्रोसंग साथ दिइरहेका छन् ।
निर्वाचनको मिति पनि निकै नजिक आइरहेको छ । चुनावि कार्यक्रमहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
यो एउटा ऐतिहाँसिक अवसर हाम्रो सामु आएको छ । चुनावको मिति नजिकिएसंगै हाम्रो व्यस्तता पनि पक्कै बढेकै छ । विहान ६ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म निरन्तर जनताको विचमा गएर आफ्ना कुराहरु राखिरहेको छु ।
तपाईका चुनावि एजेण्डाहरु केके हुन् ?
खासगरि पहिलो पटक प्रदेश सभा गठन हुँदै गरेकाले यसको विशिष्ट महत्व छ । कयौँ नितिनिमार्णहरु गर्नु छ, ऐन कानुनहरु तर्जमा गर्नुछ । साथै भइरहेका निति नियममा कहाँ के कस्तो अपप्ठ्यारो छ, त्यसलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्दै विकास निर्माणका काममा स्थानिय सरकार र केन्द्र सरकारका विचमा समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो क्षेत्र र समग्र प्रदेशको विकासमा नै अग्रणी भुमिका खेल्ने मेरोे एजेण्डा छ ।
तपाईको आफ्नै क्षेत्रका लागि चुनावि एजेण्डा के छन् ?
मेरो क्षेत्र ऐतिहाँसिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व बोकेको बुढानिलकण्ठ देखि विकासका प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको आवश्यकताको पहिचान गरि त्यसको प्रवद्धन र भौतिक विकाससंगै पर्यावरणीय सन्तुलनका माध्यामबाट विकासका मोडलहरु मैले अगाढी सार्ने छु ।
जनतामा नेताहरुले कुरा मात्रै गर्छनन् तर काम गर्दैनन् भन्ने गुनासो छ । तपाई अरु भन्दा आफूलाई कसरी फरक राख्नुहुन्छ ?
ठिक हो, जनतामा एक खालको त्यो गुनासो मैले पनि पाएको छु र मेरो विगत हेर्नुभयो भने पनि म आजसम्म कुनै गलत काममा मुछिएको छैन् । निरन्तर यहि क्षेत्रमा रहेर जनताको हरेक सुख दुःखमा साथ दिदै आएको छु । राजनिति गर्ने मान्छे सबै खराव हुँदैनन् भनेर म प्रमाणित गर्न चाहन्छु । मैले आजसम्म निष्ठाको राजनिति गरेँ र अव पनि भष्ट्रचारबाट मुक्त निष्ठा र विचारको राजनिति गर्न चाहन्छु ।
स्थानिय तहको मतको आधारमा त तपाईको अवस्था सन्तोष जनक छैन्, तपाई कसरी चुनाव जित्नुहुन्छ ?
स्थानिय तहको मतका आधारमा नै हार जितको मुल्याङकन गरिनुहुन्न । जनताको मत भनेको बदलिरहने कुरा हो र अर्को कुरा स्थानिय तहको निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा हाम्रो पार्टी भित्र पनि केही आन्तरिक समस्याहरु रहेका थिए, त्यो अहिले समाधान भइसकेको छ । हामी नेपाली काँग्रेसको जितका लागि एक ढिक्का भएर लागेका छौँ । फेरी यस क्षेत्रका जनताले मेरो विगतको भुमिकालाई पक्कै मुल्याङन गर्नुभएकै छ । म त भन्छु स्थानिय तहमा एमालेले जितेको छ र प्रदेशमा हामीले जित्दा अझ बढि विकासमा प्रतिशपर्धा हुन्छ । कसले बढि विकास गर्ने भन्ने प्रतिशपर्धाले काम गर्दा अझ बढि यस क्षेत्रको विकास हुनसक्ने हुँदा मलाई नै प्रदेश सभामा विजयी गराउनुहुन पनि म मतदाताहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । मेरा प्रतिशपर्धी जो, यस भन्दा अघाडी पनि परिक्षित भइसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँबाट यस क्षेत्रका जनताले खासै आशा गरेका छैनन् । र मलाई नै प्रदेश सभाको सदस्यमा विजयी गराउनुहुनेछ भन्ने पुर्ण विश्वास लिएको छु ।
म दैनिक प्रशासन चलाउन मात्रै सांसद बन्ने हैन । भष्ट्राचारबाट मुक्त निष्ठा र विचारको राजनिति गर्दै विकास र सम्बृद्धिको ढोका खोल्न सांसद बन्दैछु । तसर्थ यस क्षेत्रका सम्पूर्ण मतदाताहरुलाई आफ्नो विवेकको मत दिएर मलाई विजयी गराउनुहुन अनुरोध गर्दछु । तपाईहरुले पनि मेरा कुरा जनतासम्म पुर्याउनका लागि तपाईको मिडियामा स्थान दिनुभो त्यसका लागि धेरैधेरै धन्यबाद ।
Posted in मुख्य समाचार, समाचार, हाम्रा सांसद् | Tagged Sadhuram khadka | Leaveareply